Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ, Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Araç İşletme Komisyonunun Samsun toplantısına ev sahipliği yaptı. Raylı sistem işleten belediye temsilcilerinin katıldığı toplantıda bilgi ve deneyimler paylaşıldı. Samsun [ပို ... ]
Gaziray% 99 ပြီးစီးခဲ့သည်
Gaziantep ၏အကြီးမားဆုံးပြproblemsနာတစ်ခုဖြစ်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်စီစဉ်ထားသောမက်ထရိုစီမံကိန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်သည်။ မီတာစီမံကိန်းအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေပါ၊ ၎င်းသည် City Hospital မှ စတင်၍ Station Square အထိတိုးချဲ့လိမ့်မည်။ [ပို ... ]